Soomaaliya: Imaaraadka oo xaqiijiyey inuu wadayo tageerada uu siiyo Ciidamada PMPF
By GAROWE ONLINE
BOOSAASO , Puntland - Sida Illo lagu kalsoon yahay ay u sheegeen Warsidaha Garowe Online, dowlada Imaraadka ayaa Saraakiisha Ciidamada Badda Puntland u xaqiijisey iney sii wadayso howlihii tababarka iyo samafalka ahaa ay ka wadeen degaanada hoos yimaada maamulkaasi.
Hadalkaan ayaa ku soo beegmaya xilli saaka baraha bulshada (Facebook & Twitter) ay buux dhaafiyeen warar sheegaya in tababaraayaasha dowlada Imaraadka ka jooga maamulka Puntland ka baxayaan.
“Dowlada Imaraadka waxay balan qaadey iney sii wadeyso taageerada ay siiso ciidamada Badda Puntland iyadoo u xaqiijisay dowlada Federaalka, Maamulka Puntland iyo beesha caalamka sida ay uga go’an tahay iney kala shaqeyso dalka Soomaaliya sidii markale cagihiisa isugu taagi lahaa,” Sidaas waxaa GO u sheegey Sarkaal katirsan Ciidamada Badda Puntland oo diidey magaciisa in aan xusno xaalada jirta darteed.
Ciidamada Badda Puntland oo tiro ahaan ku dhow labo Kun [2,000] askari ayaa wadanka Imaraadka Carabta tan iyo intii la aasaasey waxay gacanta ku hayeen tababarkooda, qalabeyntooda iyo mushahaar siintooda.
Askarta PMPF ayaa ku kala sugan saldhigyo ku yaal xeebaha Puntland (Qandala, Bargaal Xaafuun), Buurta Galgala iyo agagaarkeeda.
Dalka Imaraadka Carabta oo kamid ah wadamadii dalka Soomaaliya u soo gurmadey markii burcad badeedka weerarta marakiibta marta xeebaha Badda Cas iyo Hindiya.
UAE ayaa go’aansatey in Xeebaha Puntland ka dhisto ciidamo kala dagaalama kooxahaan dhinaca dhulka.
Burcad badeedkii ka dilaacdey dalka Soomaaliya ayaa intooda badan waxay weerarada ugu badan ka gaysan jireen xeebta dheer ee Puntland madaama ay joqoraafi ku taalo Baddo ku wanaagsan qabsashada Maraakiibta isaga gooshta Badda Cas iyo Badweynta Hindiya.
Imaraadka Carabta ayaa wadankiisa ku qabtey shirar caalami ah ee lagaga hadlayo la dagaalanka Burcad badeedka Soomaaliya madaama welwel badan ka qabey in dhibaatadaan ay saameyn balaaran ku yeelato Gadiidkiisa Badda ee isticmaala biyaha ku dhow xeebaha dalkaan dagaalada sokeeye ka socdeen muddo ku dhow 30 sano.
Xiriirka dowlada Imaraadka Carabta iyo Soomaaliya ayaa heerkii ugu hooseeyay gaarey kadib markii Axadii lasoo dhaafay garoonka diyaaraha Muqdisho looga qabtay lacag loogu tala galay in lagu bixiyo Mushaaraadka qeybo katirsan Ciidamada dowladda.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa waxaa intooda badan dhaqaalaha ka tageera wadamada saxaiibka la ah sida Mareykanka, Midowga Yurub, Imaaraadka, Turkiga iyo UK.
Somaliland oo si kulul ugu jawaabtay Ra'iisal Wasaare Kheyre
Somaliland 04.03.2018. 10:18
Heshiiska DP World iyo Somaliland ayaa yimid kadib go'aankii Jabuuti...
Madaxweyne Muuse Biixi oo eedeeyay Dowladda Soomaaliya
Somaliland 31.03.2018. 23:36
Xog laga helay cida geysatay dilka Madaxii P&O ports ee Dekadda Boosaaso
Puntland 04.02.2019. 17:10
Dowladda Soomaaliya oo u yeertay Safiirka Imaaraadka [Sababta + Sawirro]
Soomaliya 27.03.2018. 11:36
Gollaha Wakiilada Somaliland oo jawaab u diray Baarlamaanka Soomaaliya [Akhri]
Somaliland 13.03.2018. 13:33
Baarlamaanka Somaliland ka hadlay go'aankii Gollaha Shacabka Soomaaliya
Somaliland 13.03.2018. 11:41
Aqalka Sare oo ka doodaya go'aankii Gollaha Shacab ka gaarey DP World
Soomaliya 13.03.2018. 09:32
Muuse Biixi oo ka jawaabay hadal kasoo yeeray Cirro [Daawo]
Somaliland 24.01.2018. 20:18
Qaab cusub oo uu qofka ku ciil bixi karo markuu careysan oo la hindisay 26.04.2019. 10:59
Senator Mahad Nuur: DF Soomaaliya laba khal-khal baa ka taagan 25.04.2019. 20:31
Senator Cabdiraxmaan Faroole: Dalka meel fiican kuma socdo 25.04.2019. 19:32
Xildhibaanada Soomaaliya ee haysta labada dhalasho, dalkey metelaan? 25.04.2019. 15:36
Lamaane 16-sano adoomeysanayay gabar yar oo la xukumay 25.04.2019. 15:06
Sheekh Shariif oo ka degay Muqdisho iyo wasiiro soo dhaweeyay 25.04.2019. 12:25